Vaovao - Mikasa ny hiditra ao amin'ny tokantrano homana 1 000 isa ao anatin'ny dimy taona i Beijing
Iron Board sy Holder
Mikasa ny hiditra ao amin'ny tokantrano homana 1 000 isa ao anatin'ny dimy taona i Beijing
Tamin'ny 16 Jona, Beijing dia nanao andiana valandresaka ho an'ny mpanao gazety hankalazana ny faha-100 taonan'ny niorenan'ny Antoko Kaominista China, "Beijing Promote Comprehensively". Tamin'ny fivoriana, Kang Sen, lefitry ny sekretera lefitry ny komitin'ny fambolena sy ny asa any Beijing, talen'ny talen'ny birao monisipaly misahana ny fambolena sy ny tontolo ambanivohitra ary ny mpitondra teniny dia nampahafantatra fa amin'ny sehatry ny indostria ambanivohitra dia hifantoka amin'ny trano sy drafitra firenena i Beijing. manombatombana hotely misy kintana 1 000 ao anatin'ny dimy taona ary trano fivarotana nentin-drazana maherin'ny 5.800 no azo ovaina sy havaozina mba hanatsarana ny tontolon'ny serasera maoderina amin'ny fizahantany ambanivohitra.
Nampahafantarin'i Kangsen fa tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nanjary maro karazana ny indostria ambanivohitra Beijing. Beijing dia nampihatra ny fitsangatsanganana amin'ny fambolena fialamboly, mifantoka amin'ny famoronana làlana mihoatra ny 10 avo lenta, tanàna fialamboly tsara tarehy mihoatra ny 100, zaridaina fambolena fialamboly mihoatra ny 1.000, ary mpandray fomban-drazana efa ho 10,000. Nandritra ny fialantsasatra "Festival an'ny Dragon Boat" dia nahazo mpizahatany 1.846 tapitrisa i Beijing ho an'ny fitsidihana any ambanivohitra, fiakarana 12,9 isan-taona isan-taona ary 89,3% no tratry ny vanim-potoana mitovy amin'ny 2019; ny fidiram-bola dia 251,36 tapitrisa yuan, fisondrotana 13,9 isan-taona, ary 14,2% ny fiakarana isan-taona.
Mikasika ny fanatsarana ny tontolo iainana ambanivohitra, Beijing dia nampihatra ny tetikasa "Zato Fampisehoana an-tanàna sy fanavaozana ny tanàna iray alina", izay nahavita ny asa fanavaozana ny tontolon'ny fiainana tanàna 3254, ary nanao fandrosoana lehibe tamin'ny fananganana vohitra mahafinaritra: ny nahatratra 99,34% ny tahan'ny fandrakofana ny kabine fidiovana tsy maninona. ny isan'ireo tanàna rakotry ny toeram-pitsaboana maloto dia nitombo ho 1 806; Vohitra fampisehoana fanasokajiana fako 1.500 sy vohitra maitso 1.000 no noforonina. Tanàna 3386 sy tokantrano manodidina ny 1,3 tapitrisa any Beijing no nahavita fanafanana madio, izay nitondra ny anjara birikiny tamin'ny fandresena ny ady hiarovana ny lanitra manga.
Fotoana fandefasana: Jun-21-2021
Teo aloha: Ahoana ny fomba hisafidianana kettle elektrika?